Ιστολόγιο Ijikwa abụghị ọrụ dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi gị na ebe ịntanetị, na ikekwe ọbụna bipụta otu ụlọ ọrụ ọbịa.
Y’oburu n’ibu ịmalite ịde blọgụ ma ọ bụ ịkwesịrị ịhapụ blog gị ka ọ jiri aka ya rụọ nwa oge, ihe niile a ga – eme nwere ike ịda.
Nke a na-abịa na nnapụta gị: ma ị bụ onye na-amalite ma ọ bụ onye nchịkọta akụkọ, ọ ga-eduzi gị site na isi ihe nhazi nke blog iji nwee ike iwebata akwụkwọ ndị ọbịa na ahịa mgbasa gị.
N’ihi na – ka anyi gwuo egwu – na – emeputa akwukwo nke oma n’enweghi nkpebi nke oma.
1 Ιστολόγιο Ịhazi usoro
1.1 Ένα na-ahazi nduzi a dị ka ndị a:
1.2 Απλώς Ιστολόγιο ji eme atụmatụ dị nnọọ mkpa?
2 1. Na-eme atụmatụ Kalinda gị
2.0.1 Malite obere, ma gbalịsie ike na-ele "anya ndụ"
2.0.2 Jiri Kalinda Σύνταξη
3 2. ọnọ na-arụpụta
3.0.1 "Soro dị ka ọtụtụ ndị ọzọ blọọgụ metụtara dị ka i nwere ike."
3.0.2 Σόρο "Μούσα" Gị
4 3. Ịnọgide Na-adịgide
5 4. Na-eme ka ndị ọbịa banye n’ime oge gị
5.0.1 Ego ole ka ị ga-ede n’eziokwu na otu ọnwa?
6 5. Ijikọta Ahịa Mgbasa Ozi Ọha na Nhazi Gị
7 6. Nchọpụta nsogbu (Mgbe Ihe anaghị aga dịka emebere)
7.1 Ọ bụrụ na Ị Chọrọ Ένα Blogger
8 Esi eme ka ozi oge
9 Ngwaọrụ (Δωρεάν na Ụgwọ) blog Blog na Mgbasa Ozi Mbbasa Ozi
9.2 Να-emezi και να είναι WordPress
9.3 Ụgbọ elu
9.5 Ndị na-edepụta Idea na Generators
9.7 Έξυπνο φύλλο
9.11 Διπλός Akwukwo Ntanetị na Ndepụta Ndepụta
Ιστολόγιο Ịhazi usoro
Nzọụkwụ mbụ bụ iji nweta kalenda ma ọ bụ akwụkwọ edetu (mebere ma ọ bụ akwụkwọ) ịtọọ atụmatụ gị.
Ụ bụrụ na ịnweghị ike itinye ego ọzọ na ihe a, nwere ọtụtụ ngwa ngwa ndị ị nwere nae ibudata na ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa, kalenda dabeere na PHP nwere ike ịwụnye na na nabe naụ naụ n’efu ị nwere ike ibipụta pụọ ​​ma jupụta n’aka.
Ozugbo i nereere, w nwere ike ịmalite ime atụmatụ.
Ένα na-ahazi nduzi a dị ka ndị a:
Na-eme atụmatụ kalenda gị
Ịnọgide na-agbanwe agbanwe
Tinye njikọ ndị ọbịa n’ime oge gị
Ijikọ ahịa ahịa mgbasa ozi na oge gị
Nchọpụta nsogbu (mgbe ihe anaghị aga dịka emere atụmatụ)
Mgbe ihe ndị bụ isi, ị ga-agụ banyere otu esi agụnye oge oge oge gị, yana usoro ihe omume nke nwere ike inyere gị aka ịmepụta atụmatụ ị na-enwe.
Απλώς Ιστολόγιο ji eme atụmatụ dị nnọọ mkpa?
Ray Addison si RayAddisonLive.com bụ onye nchịkọta ọhụrụ nke nọ na-eche otú ị ga-esi ahazi ya ma mepụta ya na blog ya. Mgbe o nyochachara ndụmọdụ nlekọta blog, ọ kpebiri ịde blog kwa izu ma gbalịa ịrapara na atụmatụ ahụ, na-ejikwa "ntinye akwụkwọ kwa ụbọchị dị ka mkpali maka ederede ọzọ m na-ede."
Addison mụtara na ọ dị oké mkpa ka ị "debe aha na nchịkọta akụkọ m ka m wee nwee oge ị ga-arụ ọrụ na imegharị ihe dịka mgbanwe mgbanwe m. Ολοκληρώθηκαν και δεν είχαμε πρόσβαση εκτός σύνδεσης. M na-achọkwa eziokwu ahụ bụ na ọ dị mkpa na ị na-edepụta pụtara na m ga-aga n’ihu. "
Nke a bụ ike nke usoro nhazi blog.
ΕΕ, ntuziaka ị na-agụ bụ ihe niile gbasara ịghọ onye na – ede blọgụ dị egwu Ωραίο, εε?
1. Na-eme atụmatụ Kalinda gị
Nabata kalịnda gị ma gbochie ọrụ gị, oge na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa ị ga – ebute ụzọ n’izu maọbụ ọnwa.
Nzọụkwụ nke abụọ bụ igbochi oge nchịkọta gị, n’ihi na ị ghaghị ịrapara n’ahụ ndị ahụ dịka i nwere ike.
Μήπως είμαι ο λόγος για να το κάνεις και να το κάνεις: ụtụtụ nsogbu ahụike bụ ịnye onwe gị otu nro na otu njedebe siri ike:
Ένα oge njedebe bụ oge dị mma, oge na ụbọchị ịchọrọ ịnwe ọdịnaya gị ka ọ dịzie. Ọ bụrụ n ’enweghị ahụ iru ala, ik nwere ike ịmegharị oge a dị mkpirikpi.
Ένα oge nkpeazu siri ike bụ otu nke ị na-enweghị ike ịkwụsị, n’ihi na ọ na-efu ya ga-egbochi gị atụmatụ
B bloggerrụ onye blogger dị mma ma mee ka ọ dị nro na oge siri ike maka oge gị!
Ụrụ ọrụ oge nkwụsị na nke siri ike ga-enye ghere ohere zuru oke iji nweta nchọpụta, ide na idezi ndụ ma ọ bụ ọrụ azụmahịa ndị ọzọ na-enweta n’ụzọ nke oge gị. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ na-enyere gị aka ịnọ na egwu.
Elizabeth Carter, onye isi nchịkwa na Clariant Creative Agency, malitere ịde blọgụ na mmalite 2000s. Αφού αχμμάμ kụziiri ναι "enweghị inwe usoro ịdekọ oge na-agaghị eme ka ị ghara ịde blog n’usoro."
Είμαι οπωσδήποτε, kwa ọnwa, nkeji ọnwa ọ bụla, kwa ọnwa isii ma ọ bụ otu ugboro n’afọ. Carter na-enwetakarị nsonaazụ kachasị mma mgbe ọ na-echepụta kalenda ya site na nkeji iri na ise, mana "en υπήρχαν kalfọdụ na kalenda ọnwa kwa ọnwa" ναι "Αγαπημένα azihazi usoro ihe ọ bụla na-erughi kwa ọnwa. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, άλμπουμ οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε άλλο – αρσενικά και να μην το κάνουμε. Omume dị mfe nke ịmepụta blog ahụ ezubere wepụ ọtụtụ n’ime edemede nke ide akwụkwọ ahụ n’ezie, ebe ụ bụ na akụkụ siri ike – na – abịa na echiche – emeworịrịrị. "
Carter kwukwara, sị:
Isetịpụ kalenda nkeji nkeji na-enye ghere ohere aghlaghachi ma hụ nnukwu foto nke blog gị. O yikarịrị, ị na-agbazi ihe karịrị otu ụdị agụ. Ναι απλώς, ị ga-achọ ijide n’aka naị na-edozi ihe ndị ị na-edezi iji dozie nchegbu nke nke ọ bụla n’ime ndị na-ege gị ntị. O siri ike ime na nhazi oge nchịkọta oge, ma ọ dị mfe karịa mgbe ị na-elele anya ọnwa atọ.
Nke ahụ ga-adị mfe karị ma ọ bụrụ na ịchọta isiokwu 4 ma ọ bụ 5 na niche gị, w nwere ike ịbanye na usoro nke posts, ya mere, w nwere ike ịchọta ma nyochaa tupu oge ma mee ka ọrụ gị dịk.
Stan Kimer, onyeisi oche nke Mkpokọta ejikọta ọnụ, malitere azụmahịa nke aka ya na di iche iche na Iiche na oru mmepe oru na 2010. Ọ na-eji ịde blọgụ iji gosipụta ihe ọmụma ya banyere isio. "Ịrụ ọrụ ọrụ dị oke egwu. Ναι απλώς, enweela m oge niile na ịde blọgụ ebe ọ bụ na 2010 na-aga – nke kachasị 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ kwa ọnwa ma ọ na-adịkarị na-efu otu ọnwa. "
Ma ọ bụghị naanị banyere blog – e nwere akwụkwọ akụkọ ọ ga-elekọta, εντάξει. "ΝΑΙ-ΕΖΗΠ ΑΚΟΥΣΚΟọ ΑΚΚΚ ΚΟΥΑΝΝΟ ΝΑΚ ΝΑ-ΑΔΤΑΤΑ ΟΚΟΡΡΟ ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ahụ," Κάιερ Να-εκβού, "ναι απλώς, anaghịm ebipụta blog n’otu izu nke ọnwa ahụ m na-ezipụ akwụkwọ akụkọ. Anaghị m ebipụta ihe karịrị otu blog n’izu ọ gwụla ma m nwere ọnọdụ pụrụ iche. "
Malite obere, ma gbalịsie ike na-ele "anya ndụ"
Onye edemede na ọkà okwu Joyce Kyles chọtara ya mma blog kwa izu. Ndụmọdụ ya nye ndị na-ede blọgụ ọhụrụ bụ "ime ihe m kụziri dịka ike 90. Ήταν 90 nkeji kwa ụbọchị ma lekwasị anya na otu oru. Ναι απλώς, ugboro abụọ n’izu, Ana m etinye 90 nkeji nanị na-ede blọọgụ m, ma ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, ị nwere ike ịhọrọ ụbọchị mbipụta. "
Kyles na-agbakwụnye aro ndụmọdụ ole na ole:
Gbaa nyocha weebụ maka "ntanetị weebụ nke na-enye gị ohere ịtinye okwu abụọ ma ọ bụ atọ ma mepụta isiokwu blog maka otu afọ maka n’efu" – δεν υπήρχε όμως WHSR, εντάξει! Lelee anya ntanetị nke anyị na ndị na-echepụta echiche na ndepụta nke ngwaọrụ atụmatụ na njedebe nke nduzi a.
Jiri oge nhazi oge dịka Hootsuite ịhazi oge gị.
Nhazi usoro na Facebook peeji nke (na mgbasa ozi ndi ọzọ).
Matthew Gates, onye nwe ya Nkwupụta nke Ọrụ, na-atụ aro na ị ga-amalite obere ma chọọ 1-2 δημοσιεύσεις kwa izu ọ bụrụ na ị na-amalite. "Ozugbo ị malitere ịmalite na-ewu ewu," ka ọ na-ekwu, "ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-enweta nkwanye ùgwù, ị ga-achọ maka ịkwado dịka usoro oge izu ọrụ nke 5 (MF). Ihe kacha mma ị ga – eme bụ ide ederede tupu ị gawa, [yabụ] emela ka ị na – edepụta ha. Dee ma ọ dịkarịa ala 10. Bido na-edepụta 1-2 [izu] otu izu, ma na-ede ma ọ dịkarịa ala 1-2 n’izu. "
Ogologo oge ị nwere ike itinye aka na nade blọgụ na-adabere n’ogologo na nkọwa nke isiokwu gị, nri; Gates nwere ndụmọdụ maka ndị na-ede blọgụ ogologo oge:
"Ọ bụrụ na ịchọrọ ide ederede ogologo oge bụ okwu 2.000 ma ụ bụ karịa, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịpụ na ịmepụta ụbọchị ole na ole n’izu. Ọ bụrụ na ị dee ederede mkpirikpi, n’etiti okwu 500-1000, mgbe ahụ, ọ ga-akacha mma ịmepụta ugboro ole n’izu. Έντομα, mana bụ ihe ọjọọ, mana ọ bụrụ na ị na-ezite otu ugboro n’izu ma ọ bụ otu ugboro n’ọnwa, blog gị ga-ahụ ndị nwụnahụrụ, ndị ọbịa ga-abụkwa na ha. "
Echiche Gates bụ na blọọgụ kwesịrị ịdị “ka ọ dị ndụ” dị ka o kwere mee, yabụ ibipụta akwụkwọ ole na ole kwa izu ga-abụ nhọrọ ka mma (ma ọ bụrụ na ị nwere akụ) karịa naanan. "Mana ọzọ, n’ịkwadebe maka ọnọdụ mberede ndị ahụ, ọ ka mma ide banyere isiokwu 10 tupu oge eruo, ma nwee ọ dịkarịa ala 3 maka nkwado ndabere, ọ bụrụ na ị nweta ngọngọ onye edemede ọ bụ ole na ole. izu. “
Jiri Kalinda Σύνταξη
Οποιαδήποτε lebawanye anya n’ịdị irè nke iji kalenda ederede.
Nye Julie Ewald, onye na-ede blog na ọdịnaya ndị dị na Nchọpụta Impressa, kalenda akụkọ nwere ike gbanwee atụmatụ blog ka ọ bụrụ ihe gaga nke ọma, ị chọghịkwa sọftụwia na-atọ ụt "enwere ike ịme ya nke sitema site na iji akwụkwọ ntụgharị (m na-eji Smartsheet) ma ọ bụ na kalenda Google."
Ewald na-atụ aro ka ị "lee ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ n’ọdịnihu. N’ụzọ dị otú a, w nwere ike ịnweta nlezianya dị mma nke ọtụtụ δημοσιεύσεις ị ga – emerịrị na oge etinyere, ma nwee ike ịmepụta (ma rụọ ọrụ na n’ihu) δημοσιεύσεις na ọdịnaya oge ma ak bụ ahịa ndị ọzọ. Ας πούμε, αν δεν υπήρχε δημοσίευση δημοσιεύσεων και δημοσιεύσεων σε oge-ma ọ bụ enweghị ihe ọ bụla ị ga-etinye ma ọ bụrụ na i nwebeghị ihe ọ bụla ma ọ bụ nwee ihe mberede. "
Ị ga-ahụ ndepụta nke ederede kalenda ederede na ngwaọrụ ndị ọzọ na njedebe nke δημοσιεύστε ένα.
2. ọnọ na-arụpụta
Ένα φλιτζάνι tii, ihe ole na ole na-agbaji, μια παχύσαρκα mmega ahụ, egwú dro nro na, nke kachasị mkpa, echiche ziri ezi nwere ike niile aka gị mpaghara na, naọ bụrụ na w na-enwe mgbagwoju anya, enwere ihe ole na ole i nwere ike ịnwale iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị.
Ị ga-enwe mmasị ịde blọgụ azụmahịa dị ka a ga-asị na ọ bụ akwụkwọ akụkọ onwe gị iji mejupụta echiche gị nke ọma ma nọgide na-aga.
Μα ΝΑΧ ΑΧ ΑΒΑΓΧΑΙ ΝΙΙΛ ΓΚΑΣΣΑΡΑ ΑΡΧΑΙ. Ị ga – achọpụta ihe ndị ọzọ n’èzí.
"Soro dị ka ọtụtụ ndị ọzọ blọọgụ metụtara dị ka i nwere ike."
Dave Hermansen, 13 + afọ na-azụ ahịa na-azụ ahịa e-commerce na Store Coach, Inc., na-eche ụzọ kachasị mma iji nọgide na-enwe echiche na-agbanwe agbanwe mgbe nile nke na-asọba, ọ dịghịkwa mgbe ọ na-apụ na ntinye ederede bụ:
Soro dị ka ọtụtụ blọọgụ metụtara dịka και δεν ήταν. Έντονα ịbụ ihe mgbagwoju anya nke sitere n’ike mmụọ nsọ. Debanye na ndepụta RSS nke blọọgụ ọ bụla metụtara gich niche. Λοιπόν, εχθρός, nk ụfọdụ n’ime isiokwu ndị dị mma ọbụna na-enweghị njikọ na niche gị. Jiri ha dị ka mmụọ nsọ maka ụfọdụ n’ime ihe ị nwere ike ide banyere. Kesaa ọtụtụ n’ime ezigbo isiokwu ịchọtara na netwọk mmekọrịta gị, mana chekwaa di na nwunye na ebe a d e ka echiche maata ndị ị nwere.
Ụtụle isiokwu dị iche iche ma na-ele ha anya site na nkuku ọhụrụ, na ịmegharị ihe ochie gị ma ọ bụ posts ndị ọbịa bụ ihe niile a maara nke ọma na akụkọ nta akụkọ nke na-arụụọọọ.
Σόρο "Μούσα" Gị
Λοιπόν, εντάξει mpa, ma hapụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị ole na ole n’izu ebe i nwere ike "na-aga na mmiri ahụ" ma na-enwe obi ụtọ na blog gị. Ιδέα για τη χθεσινή σελίδα και την ιστοσελίδα "Είμαι" gị ga-eme ka ị zere iwe ụkụ ma nyere gị aka ịmepụtakwu echiche maka blog banyere ọdịnihu.
Guo otu esi atuba ahia Stan Kimer si na “ngosi nka”:
Εν τω μεταξύ, θα έπρεπε να είμαι, θα έπρεπε να είχαμε 2 mọ bụ 3 blọọgụ n’otu nnọkọ ka m wee nwee ole na ole n’ime pipeline dị njikere ịga. Mgbe ụfọdụ m nwere echiche maka blog nke ga-adị ogologo, n’ihi ya, m ga-eme usoro 2 ma ọ bụ 3.
Ụ bụrụ na m gaa ogbako na-adọrọ mmasị ma ọ bụ nzukọ na mpaghara ndị m na-achọ, m ga-ede blog ma ọ bụ abụọ maka ya. Dịka ọmụmaatụ, mgbe m gara Βόρεια Καρολίνα SHRM (Συνέδριο Εταιρείας Ανθρώπινου Δυναμικού), [mgbe ahụ na ngwụcha izu] m debere mpempe abụọ abụọ maak okwu abụọ bụọ isi nke m ga-ebipụta n’oge a [n’ọnwa].
Ọzọkwa, ọ bụrụ na m na netwọk na onye na-adọrọ mmasị ma ọ bụ azụmahịa, nke ahụ ga-enye m echiche maka blog, [ma] ọ bụrụ na m nweta ụfọdụ echiche Marc Blog m ga-edeba ya, n’ihi ναι, echefughị ​​ναι.
3. Ịnọgide Na-adịgide
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΙΑ.
Danny Garcia kwenyere na “ọ dị mkpa ịnweta atụmatụ ọdịnaya ma rapara ναι. Αυτόματη περιγραφή και επιστολή του Νείλου na-enye και na-ede blọgụ bụ ịnọgidesi ike. Ọ baghị uru ọ bụla oge ị na – ezisa ma ọ bụrụhaala ndị na – agụ akwụkwọ gị mara ugboro ole ị na – ede biputere ma rapara na nke ahụ. Αγαπημένα και ugboro ugboro adịghị mkpa ka ọrụ mma, mana ịnwe opekata mpe akwụkwọ ọnwa abụọ ọ dị mma. “
Garcia na-ekwupụta etu ọ dị mma karịa ọtụtụ mgbe ọ na-abịa ịde blọgụ, n’agbanyeghị ugboro ole n’izu ma ọ bụ ọnwa ị na-ebipụta. Ọ rụtụrụ aka n’ihe atụ ole na ole ndị a ma ama:
Ιστοσελίδα blog kwa ụbọchị (dị ka Neil Patel, ma ọ bụ Seth Godin) na ndị ọzọ na blog gburugburu ugboro abụọ n’ọnwa (dika Mark Manson ma ọ bụ Ryan Ezumike). Ha niile nwere nnukwu ndị na-ege ntị, ọ bụghị dabere na ugboro ole ha na-arụ ọrụ, kama n’ihi àgwà ha.
Stan Kimer na-agbasi mbọ ike "ntanye 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ n’ihu usoro," ναι απλώς ọ "inwe ihe dị njikere ma ọ bụrụ na m banye n’oge kachasị oge ma ọ bụ oge siri ike (ma ọ bụ ọbụna gaa ezumike!)."
A bịa n’ụdị δημοσιεύσεις ịchọrọ ịgbakwunye na kalenda, yana ole, Julie Ewald na-atụ aro ka ị “nyochaa ebumnuche gị, ndị na-ege gị ntị, na oge ole (ma ọ bụ ego) ị nwere ike gin na na . Παρασκευή μετά την εκπλήρωση του νουότο νουότο και το νάιλ νείλε νιέι οκουού οκβού οκ νου, το νάουο, το μεζούο, το άλμπουμ και την ομπουά μου. Εντούτοις, έχω υπόψη μας nnyochi ebe a. “
Ewald na-atụ aro ka ị wepụta 4-na-6 δημοσιεύσεις kwa ọnwa, ma ọ bụ 2 kwa izu, dịka opekempe, ma n’ikpeazụ, ị nwere ike ịga na nọmba ọ bụla ruo mgbe ị na-anọgidesi ike n’usoro oge ezipụ gị.
4. Na-eme ka ndị ọbịa banye n’ime oge gị
Mee ohere maka akwụkwọ ndị ọbịa na kalenda gị – ha adighi obere karịa posts gị, ha na – enyere aka ịkwalite blog na nka gị.
Ihe ị ga – agharịrịrịrịrịrịrị, ị ga – eleghara blọọgụ gị anya maka ịme ndị ọbịa, naị naghị anoụcha ọkụ na mbalị ịme ma ikike kachasị elu.
Danny Garcia, njikwa njikwa ahịa na Stacklist.com, na-ekwu na “ikenye ndị ọbịa na-ekpughere gị ndị na-ege ntị ọhụrụ ma na-enye saịtị gị ihe njikọ bara uru, yabụ zere iwe na-ebute ọzọ idebanye ọbịa ma ọ bụ wepụta onwe gị (ọ bụrụ na enyeghị gị gị) nke ahụ kwesịrị inyere aka. “
Garcia chọpụtakwara, «Inwe usoro ide ihe na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ nke ọma. Achọpụtara m na m bụ onye okike kachasị ọhụrụ mgbe m tetara n’ụtụtụ wee dee ma’a waiting for 2 tupu ihe ndọpụ uche ọ bụla abanye n’ụzọ. Mgbe enwere ọtụtụ ihe ị ga – ede, ide ihe na – arụ ọrụ nke ọma, nke na – abụkarị ihe na – akpata iwe ọkụ. “
Egwuregwu ọzọ nke ndị na-agba ajụjụ na post a – – na m na-eji onwe m – bụ ịtụle ndụ gị na arụpụta ihe.
Nke ahụ bụ:
Ego ole ka ị ga-ede n’eziokwu na otu ọnwa?
Ήταν ụnụọgụ ahụ wee mee 2 n’ime posts ndị ọbịa ahụ. Ọ bụ ezigbo iwu nke isi mppisi aka ka itule idozi mbọ gị iji zere ma ọ bụ leda anya.
Λοιπόν, oge ntanetịime m na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa ndị m nwere ike ide na otu ọnwa kwesịrị iji ihe mgbu ederede 1.000 – 1.500 mee kwa ụbọchị. Ịgbalị imekwu ihe ga-emerụ ahụike uche m ma tụfuo oge dum, ya mere, iwebata nke ndị ọbịa ga-abụ nke ọma na nke ọma.
Wmụ nwoke Palmer na-echetara, sị, "Iwepụ ndị ọbịa bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-eto eto." Ọ na-ekwu na nke a bụ eziokwu karịsịa maka ndị na-ede blọgụ ọhụrụ, ma kwado ka ị "bipụtara ọdịnaya gị n’otu ugboro n’izu. Mgbe ahụ, ọ ga-eziga otu onye n’izu n’izu. "
5. Ijikọta Ahịa Mgbasa Ozi Ọha na Nhazi Gị
Dochọghị imefusị oge ị na-eji zụọ ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ka ị chọghị ka ọ rie ya oge edere.
Γκαλερί, oge iji gbaa ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi gị na ịkwalite ọdịnaya gị yana maka akwagakwa ajụjụ ndị mmadụ na azịza ya.
Ị nwere ike mezuo nke a na minit 30 kwa izu ma ọ bụ obere, ma ọ bụ ị nwere ike ịgbaso atụmatụ Mys Palmer:
Iji hụ na ahịa mgbasa ozi na-ere ahịa na ịde blọgụ ọ bụla na-eri ihe, denye aha ma Hootsuite. Ọ bụ n’efu. Ugbu a maka usoro nhazi, [nha bụ] 70% -20% -10%:
70% nke mbak gị kwesịrị ka a kọọ – m na-ekwu maka retweets, foto / re-share, na ihe ndị na-atụ n’anya na ị gbakwunye lil «somethin» kwa.
20% nke δημοσιεύσεις gị nwere ike ịbụ [ọdịnaya] ị kere – ụlọ ọrụ blog gị na atụmatụ ndị ọbịa.
10% (na naịị 10%) nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi gị kpọmkwem – Njikọ gị na onyinye gị, asọmpi ị chọrọ nkwado na, usoro ma ọ bụ ịmalite ịmalitere, διαδικτυακά σεμινάρια, wdg.
Ndị na-ege nt na-etolite mgbe a na-ere ahịa. Εντάξει.
Iji bido mgbalị gị na-azụ ahịa mmekọrịta, gụọ anyị mkpa nduzi mgbasa ozi mgbasa ozi ịmara ihe na-arụ ọrụ na isi ihe ntanetị mmekọrịta ma na-elekwasị anya na nke ahụ.
6. Nchọpụta nsogbu (Mgbe Ihe anaghị aga dịka emebere)
Kedu ihe ị ga – eme ma ọ bụrụ na ịnwe ọnọdụ mberede na ụbọchị ịchọrọ; Μα kedu ka ị ga – esi mee ka echiche «jupụta» mgbe niile mgbe ọ dị gị ka ihe ọ yourụ creativeụ okike gị agwụla?
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΔΕΝΤΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΩΝΑΣ eme ka ha mara ma ọ bụ na ị ga – emechu ha ihu ma okporo ụzọ gị ga – υπάρχει .
Anny bụ ihe Danny Garcia kpọrọ nchịkwa mmebi.
Ọ nwere ike ịdị mfe dịka ime ka ndị na – agụ akwụkwọ gị mara maka ya na ọwa na – elekọta mmadụ mgbasa ozi gị, nke mere na a na – agwa ha ya. Iji mee ka echiche ahụ jupụta mgbe niile, ị ga-agụ karịa ka ị na-ede. Δεν θα έπρεπε να είναι τίποτα. Ichoro otutu uzo di iche iche maka edemede gi obula.
Δεν μπορώ να κάνω αυτό το νόμισμα, να το κάνω, να το κάνω, να το κάνω, να το κάνω, να το κάνω. Chọrọ ọtụtụ isi mmalite d iche iche maka ozi / mmụọ. N’akwụkwọ, o nweghị uru ọ bara, mana ọgụgụ akwụkwọ na-eweta ihe ọmụma ma na-akpali imepụta ihe.
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịchọpụta na kalenda gị ezughị oke maka ndụ onwe gị ugbu a. Mgbe ahụ, chee echiche imepụta obere usoro na-eleba anya na, ma ọ bụ usoro ‘ndabere’ ị nwere ike iji mee ihe n’oge ndụ siri ike.
Raelyn Tan na-atụ aro naị na-eme atụmatụ kwa wanwa ma kwatuo usoro ahụ n’ime izu kwa izu:
Kwa ọnwa, m na-anọdụ ala ma depụta ihe m chọrọ iji mezuo maka ọnwa ahụ. Ουσιαστικά, όλα τα σχόλιά σας barusọ ide X nọmba nke δημοσιεύσεις blog na nọmba X nke ụlọ ọrụ ndị ọbịa ma ọ bụ malite usoro ọhụrụ. Mgbe nke a gasịrị, m ga-agbaji ha n’ime ihe a ga-eme kwa izu.
Mgbe nsogbu mberede bilitere, enwere m ike ịnabata ya n’ime usoro ịde blọgụ m n’ebughị nsogbu. Amaara m kpọmkwem ihe m kwesịrị ime maka izu ahụ, ụ bụrụ na m daa azụ ruo ụbọchị ole na ole, amaara m na aghaghị m ịchọta mgbe e mesịrị.
N’otu aka ahụ, ọ bụrụ na anaghị m arụpụta ihe n’ime izu ole na ole, enwere m ike iji izu ụka ndị ọzọ ma nọrọ na egwu n’ihi na amaara m ihe niile a chọrọ iji mee n’ọnwa.
Ọ bụrụ na m eme atụmatụ kpọmkwem ihe m ga-eme maka makabọchị ọ bụla, enwere m ike nrụgide na-agbalị ịnwa "mgbe niile" na-arụ ọrụ. Achọpụtala m na ọ na-esiri m ike imezu oge a na-eme kwa ụbọchị, n’ihi na enwere mberede na mberede na-eme, n’ihi ya, m na-etinye kwa izu kwa ọnwa.
Ụmụnna Palmer, CEO nke MysPalmer.com, maara na ndụ na-eme ma ụ gaghị enwe ike izere ya mgbe ọ just, yabụ “azihazi ọdịnaya gị otu izu tupu oge eruo na-elekọta ya. Needchọghị ịma mma. Banye na Hootsuite ma jiri ndị bipụta akwụkwe lee izu na-abịa. Λοιπόν, ωράριο και ναχαζί. “
Ka o sina dị, ị gaghị na-emesi ya ike. Julie Ewald kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ị ga-efu isi ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọzọ, awusi ya. «Ναι, ozugbo, δεν ήταν. Ọ bụrụ na ị na-eme ụdị mbọ SEO ọ bụla, ị ga-ahụ mbiara okporo ụzọ na ọkwa dị elu ma ọ bụrụ na ị tigharịa kpam kpam. “
Ọ bụrụ na Ị Chọrọ Ένα Blogger
Nick Brennan, onye nchoputa na onye isi nke Lelee Social Media, na-ekwu, sị: "Ήταν το igodo ati iji hazie maọ b edrụ na a na-edezi" na ị υπήρχαν onye ọzọ na-arụ ọrụ maka gị:
1. Akwukwo ọdịnaya di elu nke ebe ichoro ihe obula i choro ibi ndu kwa izu – uzo di nfe / akwukwo di nkpa, ihe di iche iche Nke Edere ya na onye obula na nke ozo, wdg.
2. Otu echiche nkwụnye ego nke ị nwere ike ịbanye iji jupụta kalenda ahụ.
3. Usoro nkwekọrịta doro anya.
"Ọ bụrụhaala naị nwere akwụkwọ edemede siri ike na ihe ndị a," Κά Μπρέναν να-αγμπάκννιε, "wgwè gị ekwesịghị inwe nsogbu ịmepụta ọdịnaya dị mma site na mgbe niile."
Οποιαδήποτε και αν ήταν η πίστωση WHSR ịnye ndem edemede na ị nwere ike ịgụ: "Site na Blogger gaa na nchịkwa Πρόγραμμα επεξεργασίας: Ndị edemede edemede maka Blog g maka. "
Esi eme ka ozi oge
Ọ bụ ezigbo echiche azihazi mpempe akwụkwọ ndị a tupu oge – ụbụlagodi ọtụtụ ọnwa dị n’ihu – n’ihi na ha nwere ike ibute ọgbaghara n’okporo ụzọ ma yabụ ị nwere ike.
Είμαι kwesiri, ị ga-eme atụmatụ nke oge oge na mmalite nke afọ ma gbochie ụbọchị kalenda ịde ha, yana oge gị. Nye oge zuru oke iji mee ihe, dịka ị ga-amaghị ihe nwere ike ime ọtụtụ ọnwa site ugbu a: kalenda rụrụ arụ ka mma karịa ọ bụla kalenda ma ọlị.
Ọzọkwa, nwere oge iji chee echiche banyere i ndị ị na-eme ma jiri nlezianya jikọọ ha na ika gị, tinyere oge ọzọ itinye aka na nyocha na ịchọta ebe iji jụọ ajụjụ ọnụ ogologo oge, ihe uru, dịka i nwere ike weghachite ntule a ma ọ bụrụ na ihe mberede abịa.
Danny Garcia kọwara, sị:
Ọ ga-adị mma ịnwe ọkwa maka iji gaa ụbọchị mbipụta] ma ọ bụ ụbọchị ga-aga. Oge ihe dị mkpa dị mkpa, mana ọ ka dị mkpa ka ị na-atụgharị post ezumike iji gosipụta ụdị gị.
Atụmatụ a na-arụ ọrụ na akwụkwọ ọ bụla ịchọrọ ibipụta, yabụ kpachara anya naị na-eme atụmatụ ọtụtụ kalenda gị na mbido afọ, ma ọ bụ ọnwa 6 ọ bụla, ma pe bụ opekata , “Gbalịa lelee ọnwa na-abịa site etiti nke gara aga. Kwadebe oge mkpado nke ọnwa ιστότοπος Νοεμβρίου και 15 Οκτωβρίου “
Ngwaọrụ (Δωρεάν na Ụgwọ) blog Blog na Mgbasa Ozi Mbbasa Ozi
Atụmatụ dị oke mkpa, mana ị gaghị eme ya niile aka! Enwere n’efu ma kwụọ ụgwọ ọrụ ị nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma iji mee ka ọrụ ntanetị gị rụọ ma debe i nile n’okpuru njikwa, n’enweghị nchekasị.
CoSchedule bụ kalịnda nchịkọta weebụ nke dabeere kpọmkwem maka ahịa ọdịnaya.
Chris Brantner, onye nwe ya CutCableToday.com, na-akọrọ ahụmahụ ya na ngwá ọrụ ahụ:
N’oge gboo, agara m na CoSchedule jikwaa blọọgụ m, ọ bụ ihe kacha mma m nwetagoro. Ọ bụghị naanị naọ na – enyere m aka ịhazi ọrụ dị mfe na ịtụtụ ndị edemede na ndị editọ, mana-na – enye m ohere sitenabata echiche site na mmalite ruo na ikenye mgbasa ozi mgbasa ozi na – naekite nke agbakwunyere na WordPress.
Ντάνι Γκαρσία kwadoro ngwá ọr maka a maakátụmatụ nhazi, na Lori Soard depụtara ya dịka otu n’ime 10 njikwa ngwaọr n maka και nd na-ede blọgụ.
Να-emezi και να είναι WordPress
Vishnu dere ederede zuru ezu esi meziwanye nhazi akwụkwọ edetu ya na akwukwo plugins. Έντερ μπιμπάκ Μπλακ Μπλακ Γκρουπ, Μου Ντουτζι.
Πρόσθετα Kasị mma edepụtara ma WordPress gụnyere:
Dezie Osimiri (nyochaa site Vishnu na post ya)
Kalinda Afọ WP
Danny Garcia na-at-aro "ngwá ọrụ na njikọta (…) nke ga-eme ka usoro ịde blọgụ dị mfe," dị ka Orbis na Task Manager.
Ụgbọ elu bụ ngwanrọ ngwanrọ weebụ maka nhazi atụmatụ nlekọta nke na-eji usoro mgbasa ozi.
Elizabeth Carter tụrụ aro sọftụwia α. Ọ bụ ihe dị mfe, igwe ojii na-agbasa ngwa ọrụ nke na-eme ka ọ dọ mfe ịgafe mpaghara data gbasara gafee usoro usoro iji. Ịka ụmụmaatụ, enwere m ike inwe kalenda nna m ukwu n’otu akwụkwọ, wee jikọta ya na akwụkwọ mgbasa ozi dị iche na-esochi isi okwu, ndị na-ede akwụkwọ, onye na-ere ahịa na nd. Ọ bụ ihe na-ahụ anya, ọ dị mfe iso ndị otu m kerịta ihe, ma nwee obi ụtọ iji ναι. “
N’okwu Garcia, Hootsuite bụ “ngwaọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nke ga – enyere gị aka ịhazigharị δημοσιεύσεις στο Facebook & Twitter ka ahịa mgbasa ozi na-ejedebe na-eri ọtụtụ oge “.
Lori Soard depụtara Hootsuite n’etiti 20 ga-enwe ngwaọrụ onye obula na onye ntanetiri gi kwesiri ijide n’aka.
Ndị na-edepụta Idea na Generators
Μήνυτο echiche bụ ndepụta nke ntinye ịde blọgụ iji mee ka ị bido ide ma zere ngọngọ onye edemede mgbe ị nweghị ike iwepụta isiokwu ma ọ bụ akụkụ iji dee banyere.
Lori Soard na-akọrọ 20 mmemme ya na post m wee chịkọta 15 blog echiche generators iji nweta nhọrọ site na nhazi ahụ ma malite ịmalite n’enweghị echiche ọzọ.
N’ime ndụmọdụ Danny Garcia maka ịde blọgụ, Trello na-enweta ebe ya dị ka onye nhazi maka ụrụ na echiche. O gosiputara uzo “odi nkpa idetu ihe ndi a ma o bu na ha gha aghafuru ha, ma o gha eme gi ahazi.”
Ọzọkwa, Trello nweere onwe ya ya iji.
Nke a bụ ngwá ọrụ atụmatụ atụmatụ Julie Ewald. Smartsheet bụ nchịkọta ọrụ nhazi nke ọrụ mgbasa ozi dịka nhazi nke na-eme ka onye ọrụ-enyi na enyi ma dị mfe iji.
Enwere ike ịnwale ngwá ọrụ ahụ n’efu ma ahịa malite na $ 14 / onye ọrụ / ọnwa.
Ebe nrụọrụ weebụ a maara nke ọma "bụ ụzọ dị ukwuu iji hụ ihe na-agbanwe," Κά Ντάνι Γκαρσία να-εκβού, "yana ọ bụkwa nnukwu ngwaọrụ ịchọta ndị ga-enwe mmasị na blog gị."
Ngwá ọrụ dị mma iji debe aka mgbe ị dị mkpụmkpụ n’echiche ọdịnaya.
Asana bụ mmemme na-ejikọta weebụ yana usoro nlekọta ụrụ maka και άλλα.
Μήπως έπρεπε να λάβουμε υπόψη 15, mgbe ahụ ọnụahịa na-amalite na $ 8,33 / onye ọrụ / ọnwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta onwe gị, ngwọta dabeere na PHP maka kalenda gị, PHP-Kalinda bụ kalịnda na-emeghe emeghe nke ọma ị nwere ike ibudata ma wụnye na nkesa gị na ntakịrị ihe ach.
Διπλός Akwukwo Ntanetị na Ndepụta Ndepụta
Εντοπίστηκαν το n’efntanetị n’efu, nke ndị na-ede blọgụ biiri ka ịchọrọ ịme ndụ nke ha (na ndị ọbịa) na-ebi ndụ ka mma.
Lee ihe onwunwe ole na ole:
Suzi sitere na StarAMomBlog.com na-enye ya Ihe SMART στόχους blogging ndetu ederede obibi.
Udiri Blọọgụ Nhazi kere ihe nhazi ihe ntanetị nke kachasị mma ibudata ma jiri.
CoSchedule nwere n’efu ndebanye kalenda ọdịnaya maka αρπάζει.
HubSpot na-enyekwa ndebanye ndebanye ederede ndị ọbịa.
na, Pinterest nwere ọtụtụ puku nhazi nhazi ịhọrọ ιστότοπος!
N’ezie, ik nwere ike ịmepụta usoro nchịkọta akụkọ nke na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na i chetara:
Ihe mgbaru ọsọ blog gị
Ụzọ ndụ gị na ọnọdụ ahụike gị
Ebu ole δημοσιεύσεις ị nwere ike dee n’eziokwu n’otu ọnwa
Εγώ είμαι ikmepụta
Λόγω του περιεχομένου και του περιεχομένου της ιστορίας του ιστοχώρου και του ιστορικού, της ιστοσελίδας και της ιστορίας του ahụmahụ onwe onye. Blogfọdụ nwere ike isonyere nnọdụ gị, ndị ọzọ nwere ike ọ bụghị, ma ebe us bụ na usoro nhazi blog bụ otu n’ime omume ndị ị na-amụta site na ikpe na njehie, m ka na-akpọ gị ka ị ị nwere ike iji nyere aka ghọta ihe na-arụ ụrụ maka gọ ma gbagote gị onwe gị usoro ihe omume hacks.
Iji nwee ihe gaga nke ọma, onye na-ede blog!
Ijikwa blog abụghị ọrụ dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike
وبلاگ Ijikwa abụghị ọrụ dị mfe، karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike
დღიურები gị na ebe ịntanetị, na ikekwe ọbụna bipụta otu ụlọ rụ ọbịa. Y’oburu
Ijikwa blogg abụghị ọrụ dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike
בלוג Ijikwa abụghị ọrụ dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike
Contents0.1 "Mee ka ọ dị mfe, onye nzuzu"1 Ighọta Ihe Ndị Dị Mfe1.1 Ihe